Baolina kitra - Fenitra kianja :: Hotsarain’ny manam-pahaizan’ny Fifa ny fotodrafitrasan’i Barikadimy • AoRaha
Mila fankatoavan’ ny manam-pahaizana manokana avy amin’ny Federasiona iraisam-pirenen’ ny baolina kitra (Fifa) ny kianjan’i Barikadimy, any Toamasina. Hisy ireo iraka manokan’ity rafitra maneran- tany ity ho avy eto Madagasikara hijery ifotony an’io kianja io. Nandeha be ny resaka, tato ho ato, momba ny fikasana fandraisan’i Madagasikara lalao iraisam-pirenena amin’ny baolina kitra, any Toamasina, amin’ izao fikatonan’ny kianjaben’ i Mahamasina izao.
“Misy fepetra manokana takina amin’ny fampi-antranoana lalaon’ny fiadiana ny amboara maneran-tany. Tsy i Barikadimy irery no hanaovana izany fa ireo kianja maro manerana an’i Afrika”, hoy i Jean François Debon, tale teknika nasionalin’ny Federasiona malagasin’ny baolina kitra (FMF). “Tsy misy ifandraisany amin’ny mety hanaovana ny lalaon’i Côte d’Ivoire sy Madagasikara any an-toerana na tsia izany. Fankatoavana ho an’ny Mondial 2022 izao hatao izao”, hoy hatrany ity lehiben’ny teknisiana malagasy ity.
Lalao amin’ny alina
Isan’ireo hojerena ny fahazavan’ny kianja, raha toa ka handray lalao amin’ny alina. Toy izany ihany koa ny kalitaon’ny bozaka sy ireo trano fisoloana akanjo ary ireo toeram-pidiovana, ankoatra ny vavahady fidirana sy ny fivoahana. “Betsaka ny pitsopitsony tokony harahina amin’ny fandraisana lalao iraisam-pirenena, indrindra ny fiadiana ny amboara maneran-tany toy izao”, hoy hatrany i Jean François Debon.
Mpifaninana amintsika ao amin’ny vondrona J i Bénin, RD Congo ary Tanzania amin’ny fikatsahana tapakilan’ny “Mondial 2022”,hatao any Qatar.
Mialoha izany anefa dia mbola ankamantatra hatrany ny kianja handray ny lalao hifanandrinantsika amin’i Côte d’Ivoire, amin’ny faran’ny volana marsa 2020. Mbola mipetraka ho safidy tsy ahitam-baliny, hatramin’ ny omaly, i Barikadimy sy Vontovorona. Mety ho fantatra amin’ny faramparan’ity herinandro ity ny ho valin’izany, araka ny loharanom-baovao avy ao amin’ny Federasiona malagasin’ny baolina kitra.
Fiainana atleta :: Sivy amby roapolo taona nikatrohana volley-ball i Andry Be
Basket-ball – Africa League :: Hifandona voalohany amin’i Maraoka ny GNBC